Mashruucyada Isku-dhafka leh ee AutoCAD 3D - Geofumadas
Mashruuca injineernimada oo leh AutoCAD madaniga 3D
Abriil, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Engineering, topografia
Waa mid ka mid ah khayraadka ugu dhameystiran ee Isbaanish ah ee aan arko ku saabsan 3D Civil, waxaan ogaaday tan iyada oo loo marayo Forum of Cartesia iyo waxa ay u muuqataa aniga in marka lagu daro Ilaha AUGI Waxay ku dhowdahay inay ku barato 3D madani ah.
Waxaa lagu hormariyay ApliCAD kaasoo sida muuqata waxay ka wada shaqeeyaan tarjumaadda dukumenti si buuxda ay dhisay talooyin ka Neus Ros (Engineer Geodesy University Polytechnic ee Valencia). Si aad u hesho waa inaad iska diiwaangelisaa bogga internetka AptCAD, isla markiiba waxaa la helaa isticmaale iyo lambar sir ah kaas oo aad ka soo dejisan kartid dukumiintigan, laakiin qaar kale oo ay bixiso shirkadan.
Tusaha tusmada waa tan:
1.- Hordhac Qeybta Autocad 3D
Bilawga bilowgiisa waxa uu diiradda saarayaa sharraxaadda guud ahaan qaabka gaaban, waxa uu ka maqan yahay waxa dukumiintiga buuxa noqon doona maxaa yeelay uma muuqato in ay tahay mid hodan ku ah jimicsiga iyo tusaalooyin lagu sharraxay Spanish wanaagsan.
2.- Soo-dejinta iyo maareynta faylasha faylka
Cutubkan waxaa ka mid ah gelinta dhibcooyinka, qeexidda kooxaha dhibcooyinka, hagaajinta iyo maareynta miisaska dhibcooyinka.
3.- Module of patch.
Qeybtan waxaad ka heli doontaa maareynta boorsooyinka ka socda walxaha Autocad, iyo sidoo kale dhismaha warbixinnada sida sanduuqyada tilmaanta iyo sanduuqyada goobaha.
4.- Soo-saarida MDT: Falanqaynta heerarka sare, dhiiqada iyo biyaha.
Abuurista moodooyinka wareega dijitalka, MDT, GRID, TIN, heerarka heerarka, khadadka jajabka, maaraynta mugdiga, khariidadaha jilicsan iyo dhirbaaxida raajada ah ee kufilan qaabka dijitaalka ah.
5.- Naqshadeynta mashruuca
Qaybtan cutubkan iyo qaabaynta sharaxaadda ayaa la qabtaa.
6.- Diyaarinta isku dhafka
Naqshadeynta joometeriga ee waddooyinka, isku xirnaanta, curfadaha xajmiga
7.- Soo saarida qaababka dheeriga ah
Goobaha dhirta, qaababka toosan ee waddooyinka, qaybaha caadiga ah,
8.- Soo saarida qaababka transversal
Qaybaha kala-qaybinta, khadadka xariiqa qaybta
9.- shaqooyinka saxda ah. Noocyada iyo naadiyada qaybaha.
Qeybaha caadiga ah ee wadooyinka, qaybo ka mid ah shaqada toosan, dhiiqo, aragti iyo isdhexgalka wadada
10.- dhaqdhaqaaqa dhulka.
Xisaabinta qiyaasaha, dhejinta qaybaha kala duwan, jarista iyo buuxinta, mugga isku dhafan
11.- Helitaanka wargelinta mugga
Qalabka wuxuu ku saleysan yahay buugga Ingiriisiga ee 3DWaxay leedahay qaar ka mid ah layliyada la mid keenta Manual ee 3D Civil in English, laakiin waxaa la gabi ahaanba la dhisay by ApliCAD la bara saaxiibtinimo, waa workflows aad u wanaagsan in ay yihiin cutubyada qaar ka mid ah si ay u sharxaan habka oo dhan nidaamka keentay dheer Waxaa intaa dheer soo qaado feylasha u adeega inay sameeyaan layliyada, kaliya waa weyn.
Post Previous«Previous Isku xir Manifold leh Khariidadda Furan
Post Next QCad, alternative AutoCAD for Linux iyo MacNext »
37 Jawaab ah "Mashruucyada Isku-dhafka leh ee AutoCAD 3D"
jhovani isagu wuxuu leeyahay:
Hello iyo mahadsanid macluumaadka boggan. aan dhibaato waa in adigoo waddada iyo show qaybaha iskutallaabta ha ka soo muuqan dhamaystiran cornering tusaale ahaan haddii iskutallaabta qaybta waa horusocod ah halkaas oo qalooca ka siman yahay wax soo saarka sida nuqul ama haddii ay jiraan laba qaybood ee qaybtan, tani dhacdo in marka hore ay qaybta halkaas oo qalooca bilaabo markaas xiga waxa ay si toos ah u gudbin qaybta ceshadka ee xariiqa qallooca, tani sidoo kale waa labalaabka ka dibna si toos ah maray in ay qayb ka mid ah racta waddada. tusaale ahaan haddii qaybaha jira barnaamijyo 20 mitir kasta oo si toos ah iyo 10 mitir kasta oo gooladaha iyo haddii xariiqa qallooca ayaa u bilaabantaa horusocod ah 1 + 820 Qaybtani waxay u muuqda laakiin nuqul ee soo socda uu noqon doono + 1 ku 830, taasi ma muuqdaan, sidoo kale dabcan soo socda kaliya qaybta ugu dambeeya ee xariiqa qallooca ayaa u muuqata tusaale ahaan 1 + 930 laakiin sidoo kale labalaabka laakiin ma qaybta ugu dambaysa waa in xariiqa qallooca ayaa u muuqata iyo si toos maray in ay qayb ku saabsan line ah, fadlan talo kasta sababtoo ah baadi this waa kale kale ee 3d madani ah oo aan helay markii aan isku dayey inaan barto barnaamijkan.
Mar labaad haddaba, halkaas oo aan ku heli karo buugga Autocad Civil 3D af Ingiriis.
ok waan arki doonaa inaan ogaado, mahadsanid
Saaxiibkay si dhakhso ah uma dheelo, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad weydiisato fadhiyada sida Cartesia iyo Gabriel Ortiz ama buugga AutoCAD Khariidadda, maxaa yeelay uma maleynayo inaysan macquul ahayn. Nasiib darrose, si run ah ugama jawaabi karo sababtoo ah ma haysto barnaamijka.
markaa ka dib markaad toos u fayl geli karin faylka khariidadda cad ee Google.
Waa inaan, nasiib darro anigu iguma haysto doorashadaas. Waxaan arkayaa Civil3D 3008, Khariidad / Qalab / Dhoofinta laakiin ma leh ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo loogu diro kml, laga yaabee inay jiraan plugin ah.
Su'aasha Autocad Map waxay leedahay doorashadan? ama Bentley Map keliya ayaa leh.
Waa inaad u dhoofisaa kml si aad ugu dhejiso Google Earth
Hello Hello! Sidee baan u dhoofin karaa faylasha caddaynta qaabka xml si aan u eego Google sida aan u sameeyey Microstation.
Waxaan isticmaalaa Map AutoCad 2008 iyo marka dhoofinta waxay ii sheegeysaa in ay soo saarto waxyaabaha 95 laakiin waxba ma badbaadin. Maxaa dhacay?
Walaalahayga, saaxiibkey, ma aanan iskuulin laftigayga.
Waa hagaag iyaga oo ku dhajiyay faylka lmbrt.g66, oo leh astaamahan
Qaybta 1: Aqoonsi / Aqoonsi / Macluumaad La Soo Saaray
# gcP_RAD (xagasha yar yar) Clarke 1866
gcDAT_NM: North American Datum ee 1927 (US48, AK, HI, iyo Canada)
gcSOURCE: Qalabka wadahadalka
## Qaybta 2: Xog aan la soo koobi karin, Isku-duwaha Nidaamka Xogta Gaarka ah
Waxaan isku dayi doonaa macluumaadka aad iigu soo dirtay ee ku saabsan taageerada Bentley waxaanan kuu sheegi doonaa haddii aan sameyn karo.
Waan ku faraxsanahay, halkaas waxaad ii sheegtaa sidaad u samaysay.
Mahadsanid! Anigu waan isweydiinayaa.
saaxiib sax ah
Waxaan u direy boostadaada
waxaad ixtiran kartaa calaamadda aan u baahanahay in aan wax ka badalo maaddaama ay yihiin mitirada 100 ee waqooyiga in aan u guuro khariidadeyda. Way fiicnaan lahayd inaad isku daydo macluumaadka taageerada dadka ku siiyay.
Haa, Juqraafi ahaan wuu sahlanaa qaybtan. Jawaabta taageerada ayaa aniga ii timid, laakiin run ahaantii waa kalabar dhib badan.
Waxaan ku dhawaaday inaan ku guuleysto mitirka 100, waxaan isku dayi doonaa inaan isku dayayo, laakiin waxaan ku sameeyay Geographic, tan iyo markii aanan helin xogta bentley map.
Waa hagaag, dib ugu noqo mawduuc si aad u habayso saadaasha:
Waxaan arkayay in Juqraafi ahaan tani ay fududahay, waxaad aadi jirtay Qalabka / nidaamka iskuduwaha / halkaasna waxaad ku xushay Master, ka dibna Conic iyo lambert conformal conic. Oo halkaas waxaad ka beddeli kartaa xogta sida aad boostada ugu gelisay. Haddii la hagaajiyo, waxaad ka sameysay koobiga faylka .g66 ka dibna waxaad doorataa "sayid / akhriso ASCII g66", wax ka beddelid iyo voila.
Uma arkin sidaas Khariidadda Bentley, waxaan sameeyay weydiinta si aan u taageero, laakiin ikhtiyaarka kaliya ee aan u arko waa in: Qalabka / nidaamka isuduwidda, ka dibna halkaan ka dooro "maktabadda" ka dibna waxaad eegtaa maktabada "la saadaaliyay", Woqooyiga Ameerika, Waqooyiga Ameerikaanka sinnaanta Conic. Waxa aanan halkan ku arkin waa sida loo saxo.
Waxaan u maleynayaa inaad u baahan tahay inaad saxdo faylka cagaha: waxaad tagtaa cinwaankan:
C: Barnaamijyada BarnaamijkaBentleyGeospatialExtensioncoordinateparam
oo halkan waxaad ka raadineysaa saadaalinta ku habboon, oo aad nuqul ka sameysan kartid. Hubi, waxaan u malaynayaa inay noqon karto:
waxaad ku furi kartaa farriin, waxaadna arki doontaa waxyaabo sida:
gcPRJ_NM: Mashruuca Lambert Conformal Conical
gcDAT_NM: Nidaamka Joometiga Aduunka ee 1984
gcELL_NM: Nidaamka Joometiga Aduunka ee 1984
gcSOURCE: Geo-ga Xiriiriyaha Dialog
waa inaad laqabsataa xogta, haddii aad shaki ka qabtid waxa ay ula jeedaan, waxaad u aadeysaa caawinta Bentley Map, waxaadna raadineysaa qeexitaanka midkasta oo ka mid ah “ASCII Nidaamka Keywords”, kaas oo aad ku sameyso raadinta adigoo ku dhejinaya mid ka mid ah magacyada, waxay u muuqan doontaa.
Marka aad sameysid hagaajinta, waxaad ku dhejisaa:
Nidaamka Dhismayaasha / Iskuduwaha / Akhriso ASCII .g66
Tijaabi oo ii sheeg haddii aad leedahay wax caqabado ah.
Waxaad i siisaa fursad aad ku soo noqotid ilbaxnimo, waxaan ku socdaa socdaal.
Gacaliye Waxaan horay u soo diri faylasha, waxaan rajeynayaa inaad iigu sheegto sida loo abuuro saadaasha iyo dhoofinta KLM.
aad u dhuuban JOSE
Fadlan ii soo dir feyl si aan isha ugu hayo
tifaftiraha (at) geofumadas. tag
Waxaan kuu soo diri karaa xogta iyo barnaamijka laga yaabo in la abuuro. taas oo email ahaan aad u diri karto xogta ama waxaan halkaan kuugu soo dirayaa golaha. aad u mahadcelin
Thanks waxaan u maleynayaa in aan haysto macluumaadka aad sheegeyso, waxaan u baahanahay caawinaad aad ku abuurto qiyaasta aad sheegeyso, taas oo ah meesha aan lumo.
Waxaad u baahan doontaa inaad ka hesho xogta laga helay xogta degaanka ee degaanka ah, oo xaaladahaas oo kale ah, waxaan u maleynayaa, inay beddeleen qiimaha bari iyo been-abuurka been abuurka ah.
Markaa waa inaad abuurtaa saadaalinta isbedelka, ka dibna u qoondeeynta saadaasha kuwan ka dibna dhoofinaya kml.
Waad ku mahadsan tahay, shir kale ayaa ka tagaya welwelkaas; Hello, waxaad iga caawin kartaa inaan dhoofiyo faylasha kml, waxaan isku dayaa inaan bedelo habka isku-duwidda Bentley Map balse waddankayga El Salvador wuxuu ku jiraa 16, laakiin sida uu yaryahay, waxaan la shaqeyneynaa qayb ka mid ah miisaaniyada, Sidee baan ku samayn karaa kiiskan, tan iyo markii aan dhoofiyo, feylka ku yaala Badweynta Baasifigga ee aniga iiguma dhaco, sida kiiloomitir iyo badh koonfurta. Waad ku mahadsan tahay
Vicente, waa maxay cinwaanka internetka?
Qalabka autocad 3d 2009, waa mid aad u wanaagsan, waxaa suurtogal ah in la helo 2010.
Jose Luis isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2009 at
Xidhiidhkii download ma shaqeynayo !!!!! Miyaad hagaajin kartaa ??? _ Mahadsanid
Renzo Ruiz isagu wuxuu leeyahay:
Waxyaabaha la soo bandhigay ayaa aad u caawin kara kuwa naga mid ah ee la shaqeeya barnaamijka si aad u fiican u diyaargaroobaya layli wax ku ool ah. WAXAAD WAXAAD TAHAY INAAD ADIGA AH. Hambalyo si ApliCAD. iyo Geofumed si ay u bixiyaan aqoonta buug aad u weyn.
David isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin, waad ku mahadsantihiin buugaag badan, si aad u qiyaasi kartid inta jeer ee ay naga badbaadinayaan barashada barnaamijkan.
roodhiga guillermo isagu wuxuu leeyahay:
Anigu ma garanayo sida aan ugu mahadceliyo caawimaadda ay ku siiyaan tabarucan !!!
Pablo E. Hass G. isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin, wararku waa mid qiimo leh. Waxaan jeclaan lahaa daabacaadda articles articles oo la xiriira.
Waad ku mahadsan tahay caddeynta Vicente, waan isbarbar dhigayey, waxaana jira xoogaa isku mid ah oo laylisyada ah oo la yimaada baraha 'Civil3D', laakiin saameyn ahaan, waa shaqo weyn oo ay qabteen. Horaan bayaan uga dhigay caddeynta boostada.
Salaan iyo hambalyo
Vicente Alarcon isagu wuxuu leeyahay:
Magacaygu waa Vicente Alarcon oo waxaan ahay Dork. ee Waaxda GIS iyo Machadyada Madaniga ee APLICAD. Waxaan ku faraxsanahay in dukumintiyadan aan sameynay ay adiga waxtar kuu noqon doonto. Waxaan rabaa inaan sameeyo kormeer si aad u soo bandhigto inaad samayso buugga. Buuggani maahan mid wax ku-ool ah oo Ingiriisi ah, marka laga reebo waxa laga soo qoray mid ka mid ah injineeradeena codsigeenna: Neus Ros (injineer Geoday oo ka socda Jaamacadda Polytechnic ee Valencia).
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad xiiseyneyso mawduucyada GIS, waxaan idiin ku martiqaadayaa inaad soo dejiso buug-gacmeedka GIS-ga Autocad MAP oo ka socda Rafael Serrano iyo Vicente Alarcon boggayaga internetka.
Ku salaamayaa dhammaan.
Waxaad ka soo dejisan kartaa bogga ApliCAD, waa inaad iska diiwaangelisaa
Giovanni isagu wuxuu leeyahay:
Halka, xaggee baan ka heli karaa buuggan? waad ku mahadsantahay